China Tri-isobutyl ဖော့စဖိတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထောက်ပံ့သူများ | ကံဇာတာ
Triisobutyl phosphate သည်မော်လီကျူးဖော်မြူလာ C12H27O4P ပါသောဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။
ပွက်ပွက်ဆူနေသောအချက် - ~ ၂၀၅ ဂ (လီတာ)
သိပ်သည်းဆ - ၂၀ ဂရမ် (လီတာ) တွင် ၀.၉၆၅ ဂ / ml ဖြစ်သည်။
အလင်းယိုင်အညွှန်းကိန်း: n20 / D ကို 1.420
flash point - 150 ° C
၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အငွေ့ဖိအား - 0.0191mmHg
Triisobutyl phosphate ကိုအေးဂျင့်နှင့် penetrant အသုံးပြုသည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုးခြင်း၊ မှင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
Tri-isobutyl ဖော့စဖိတ်စျေးနှုန်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုနှင့်အတူပေးအပ်ခြင်း, Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd, သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအလွန်ထူးချွန်သော tri-isobutyl ဖော့စဖိတ်ထုတ်လုပ်သူများအကြား, 126-71-6, အမြောက်အများကို၎င်း၏စက်ရုံမှဝယ်ယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
1. မော်လီကျူးပုံသေနည်း： C12H27O4P 2. CAS-NO.:126-71-63 ။ မော်လီကျူးအလေးချိန်6266.324 ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်： ပုံပန်းသဏ္:ာန် - အရောင်အသွေးမရှိခြင်းနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာသောအရည်အရောင် (APHA): 20 maxAssay％ WT: 99.0 minSpecific Gravity (20 ℃): 0.960-0.970Moisture (%): 0.2 maxAcidity (mgKOH / g): 0.1 maxRefractive Index (n20 / D) : 1.4190-1.42005 ။ အသုံးပြုခြင်း။ ၎င်းသည်အလွန်အားကောင်းသော၊ ရေပမ်းစားသောအရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ရေမြှုပ်ကောင်အဖြစ်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်အရည်များ၊ ထုတ်ယူသောပစ္စည်းများနှင့်ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာ၏အခြားလယ်ကွင်းကွန်ကရစ်ထပ်, ကော်နှင့်ကော်နှင့်တူးဖော် fluids.6 ပါဝင်သည်။ ထုပ်ပိုး: 200kgs / သံဗုံပိုက်ကွန် (16 တန် / FCL); 1000kgs / IBC (18 တန် / FCL); 20-23tons / Isotank ။
Tri-isobutyl ဖော့စဖိတ်စျေးနှုန်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုနှင့်အတူပေးအပ်ခြင်း, Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd, သည်တရုတ်ရှိအကောင်းဆုံးသော tri-isobutyl ဖော့စဖိတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအနေဖြင့်၎င်း၏စက်ရုံမှ tri-isobutyl phosphate ကိုအမြောက်အများဝယ်ယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။